China Industrial temometa Emeputa - Ogo Industrial temometa kwuru - Testeck Co., Ltd.
.Lọ > Ngwaahịa > Okpomọkụ mmetụta > Temometa nke ụlọ ọrụ
Igwe mmiri mmiri ahụ kwesịrị ekwesị maka iji nweta usoro okpomọkụ na ọnọdụ okpomọkụ dị ala, enwere ike iji ya tụọ okpomọkụ nke gas, mmiri mmiri na uzuoku. A na-ekekarị ya ụzọ atọ: ụdị axial, ụdị radial na ụdị ụwa niile.
Testeck bụ otu n'ime ndị ọkachamara na ndị nrụpụta Temometa nke ụlọ ọrụ na China. Biko nweere onwe gị ịzụta nnukwu ogo Temometa nke ụlọ ọrụ dị na ngwaahịa ebe a wee nweta nkwupụta sitere na ụlọ ọrụ anyị. Ọzọkwa, ahaziri ọrụ dị.